Xmas - Noely - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Day-by-Day > Xmas - Krismasy
Ny Krismasy dia ahitana ny fitiavan'Andriamanitra ny olona, ​​araky ny vakiantsika ao amin'ny Jaona 3:16. "Satria tia an'izao tontolo izao Andriamanitra, dia nomeny ny Zanany lahitokana, ka izay rehetra mino azy dia tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay". Tian'Andriamanitra hankafizantsika ny fanapahan-kevitra noraisiny ny handefasany ny Zanany amin'ity tontolo mpanota ity. Nanomboka tamin'ny ankizy iray tao amin'ny famahanana tao anaty lemaka fanetren-tena izany.
Ny fanilikilihana mahaliana amin'ny Krismasy dia ny fanafohezana izay lasa mahazatra antsika ankehitriny - «Xmas». Nesorina tao amin'ny teny hoe "Krismasy" i Kristy! Ny sasany dia manamarina izany amin'ny filazana fa X dia mijoro amin'ny hazo fijaliana. Raha marina izany, dia mbola misokatra ihany raha toa ireo izay mampiasa ny teny dia mahazo ny fanazavana.
Rehefa mankalaza ny nahaterahan'ny Mpamonjy antsika amin'ny namana sy ny fianakaviantsika dia tokony hofantarintsika tsara fa hitodika any aminy isika: «Tianay ny hibanjina an'i Jesosy, ilay mpialoha lalana, sy ny fahatanterahan'ny finoana - satria fantatr'i Jesosy ny fifaliana miandry azy, izy nitondra ny fahafatesana teo amin'ny hazofijaliana sy ny henatra niaraka taminy ary ankehitriny dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana any an-danitra amin'ny ankavanan'Andriamanitra izy (Heb. 12: 2).
Rehefa manokatra ny fanomezanao amin'ny Krismasy ianao dia tadidio izay nosoratan'ny apôstôly James ao amin'ny toko 1:17: «Avy any ambony dia fanomezana tsara sy fanomezana tonga lafatra ihany: avy amin'ny Mpahary ny kintana, izay tsy miova ary miaraka amin'iza tsy misy fiovana avy amin'ny mazava mankany amin'ny maizina ». Jesosy no be Noely lehibe indrindra fa tsy ny Krismasy (Noely).